Dịka ị nwere ike ịchọpụta, June bụ Litecoin Month na ọkacha mmasị gị cha cha cha cha Oke. Enwere ọtụtụ self love pụrụ iche ị ga – enweta maka itinye na Litecoin. Ndị a gụnyere:
Iji nwee ike ị nweta onyinye ndị ahụ pụrụ iche, itinye self Litecoin bụ isiokwu inyocha. Yabụ, ka anyị bido website Id mbido. Anyị na-eche na ị nwere akaụntụ cha cha gị niile, yana obere akpa mkpuchi meghere.
Nzọụkwụ mbụ na itinye self t Litecoin bụ nbanye na akaụntụ cha cha gị ma họrọ nhọrọ”nkwụnye self” nke na-ewega gị ozugbo na Cashier. Na Cashier, ị ga-ahụ nhọrọ atọ: nkwụnye self indulgent, wepu, gbapụta. Nkwụnye self love bụ nke ịpị. Họrọ Litecoin dị ka nkwụnye ego. Nwere ike pịgharịa gaa na ntakịrị iji họrọ LTC. Ọzọ, kọwaa self love ole ị chọrọ itinye. Biko rịba ama ntakịrị nkwụnye self service bụ LTC nke $10. Pịa bọtịnụ”nkwụnye self”n’okpuru ngalaba ego. Ozugbo ịmechara usoro a, adreesị LTC ga-apụta na ihuenyo gị n’okpuru koodu QR. May nwere ike idetuo adreesị ma ọ bụ nyochaa koodu QR pụtara na ihuenyo ahụ. Ugbu a, gaa na”izipu” ngalaba nke obere akpa gị miniature mado adreesị Litecoin nke emepụtara na mbụ na ihuenyo gị. Na ịpị”zipu” mechie usoro nkwụnye ego t self na-egosi d e akaụntụ cha cha gị. Ọ bụrụ na ị na-eji QR code, nanị I scanomi un t ekwentị gị.
Lelee otu esi dị mfe na ngwa ngwa. Nkwụnye self service Litecoin nwere ike ịnye gị oheren’ọkwá kachasị mma na June. O nwekwara ike ime ka usoro azụmahịa ahụ dị ngwa ma chekwaa ego ị ga-eji na-akwụ ụgwọ azụmahịa.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ enyemaka na Litecoin nkwụnye self explanatory, nweere onwe gị ịkpọtụrụ nkwado ndụ anyị. Ha na-abụghị n’ịntanetị na-akwụsị. Jisie ka anyi mara ka osi gaa!